बिदेश लान्छु भन्दै एक युवतीले २ जना छोरीलाइ बेचेको भन्दै आमा डाको छोडेर रोइन, के हो बास्तबिकता ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
Sisir Budhathoki May 31, 2021
बैदेशिक रोजगारमा गएका धेरै नेपाली चेलीहरु बेचिएका समाचार आइरहेका बेला मोरंगको कानेपोखरी बाट अर्को दुखद खबरी आएको छ ।
आफ्ना २ जना छोरीलाइ अर्की नेपाली चेलीले बिदेश लान्छु भन्दै फसाएको आरोप लगाएर अहिले हिरासतमा भएको बताएकी छिन । आफ्ना छोरीलाइ चेलीबेटी बेच्ने आरोप लगाएर फसाएको बताएका हुन् ।
अहिले छोरीलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान चलेको २ बर्ष भएको तर कुनै जानकारी नआएपछि बृद्ध बुबा आमा रुँदै आफना छोरीलाई सहयोग गर्दिन सबैलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । आफ्ना २ जना छोरीका ४ जना नानिको पनि अहिले बिजोक भएको आमाले बताईन । छोरीहरु माथि षड्यन्त्र गरेर नगरेको आरोप लगाएर फसाएको आरोप बुबा आमाले लगाएका छन् । के हो बास्तबिकता ? तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।